सल्यकृया पछि एक युवतीको मृत्यु , डाक्टरको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको पिडितको आरोप | Hulaki Online
2021 Mar 09, Tuesday 07:58
सल्यकृया पछि एक युवतीको मृत्यु , डाक्टरको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको पिडितको आरोप
संप्रेषण September 1, 2016
जनकपुरधाम,भदौ-१६। जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा प्रसुतीका लागि भर्ना भएकी एक युवतीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले डाक्टरको लापरवाहीका कारण यस्तो भएको आरोप लगाएका छन् ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भर्ना भएकी महोत्तरीकी २६ वर्षीया चन्द्रकला पासवानको शल्यक्रियाका क्रममा निधन भएको हो । शल्यक्रियाका क्रममा डाक्टरले बच्चा निकाल्दा पाठेघर नै निकालिदिएको आफन्तजनको आरोप छ ।[ad id=”8142″]
प्रसव व्यथाले च्यापेपछि महोत्तरी भरतपुर ४ निवासी पासवानलाई सोमबार राति ८ बजे जनकपुर अञ्चल अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनका श्रीमान शिवजीका अनुसार समय पुग्दा पनि २४ घण्टासम्म बच्चा नजन्मिएपछि डाक्टरको सल्लाहमा शल्यक्रिया गर्ने निर्णय भएको थियो ।
मृतकका काका अनिल पासवानका अनुसार प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा.शिला सिंहले चन्द्रकलाको शल्यक्रिया गरी बच्चाको स्थानमा पाठेघर नै झिकेपछि अत्याधिक रक्तश्राव भएको हो ।
शल्यक्रियापछि डा. सिंहले पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको बताएको आफन्तले जनाएका छन् । अत्यधीक रक्तश्रावका कारण ७ पाउण्ड रगत चढाइएको थियो ।
डा.सिंहको समूहले शल्यक्रियाको क्रममा गडबढी गरेपछि अत्याधिक रक्तश्रावका कारण चन्द्रकला झनै सिकिस्त बनेको आफन्तको आरोप छ ।
बुधबार बिहान पीडितको अवस्था नाजुक भएपछि अस्पतालले जनकपुरकै सिटी हस्पिटल रिफर गर्‍यो र त्यहीँ उपचारका क्रममा चन्द्रकलाको मृत्यु भयो । उनका दुई छोरी छन् । पीडित पक्षले चिकित्सकको लापरबाही भने पनि बिहीबारसम्म अञ्चल अस्पतालले यो आरोप स्वीकार गरेको छैन । अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ट डाक्टर गौराग मिश्राले चन्द्रकलाको सामान्य रुपमा बच्चा नजन्मेपछि डा. शिला सिंहले शल्यक्रिया गरेकी हुन् ।
शल्यक्रियाका क्रममा पाठेघर फाटेपछि अर्का प्रशुति रोग विशेषज्ञ डा.विजय सिंहलाई बोलाएर दुबैले तीन घण्टा लगाएर शल्यक्रिया सफल गरिएको अस्पतालको भनाइ छ ।
शल्यक्रिया पश्चात चन्द्रकलाको अवस्था ठीक भएको र रगत अभावका कारणले उनको ज्यान गएको मिश्राले बताए । यस विषयमा शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरहरुसँग सप्टष्टीकरण मागिएको र गलत गरेको ठहरे कारबाही गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
अस्पताल र डाक्टरको लापरवाहीले चन्द्रकलाको ज्यान गएको परिवारजनले आरोप लगाउँदै दोषी डाक्टरलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । कारवाही नगरिए आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रने अनिलले बताए ।